IIKHITSHI ZAMAGCISA EZINGAMA-37 EZINEEKHABHATHI EZIMNANDI - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhitshi zamagcisa ezingama-37 ezineeKhabhathi eziMnandi
Le galari inezinto ezintle iikhitshi. Isimbo sokuyila sobugcisa saziwa ngemigca yaso ecocekileyo, iikhabhathi zemithi ezityebileyo kunye nolwakhiwo olusemgangathweni. Isitayile sendlela yobugcisa ikhitshi lekhabhathi lixhomekeke kwimithi yendalo kunezinto zokwenziwa. Iindidi zeenkuni zihlala zisetyenziselwa iikhabhathi zibandakanya i-oki, i-hickory, imephu kunye necherry. Uyilo lobugcisa kuyilo lwekhitshi lengcibi lolwemveli ngezinto ezilula ezenziwe ngobuchule kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu.
Eli khitshi lisebenzisa ukudityaniswa kwezinto ezimbini ezigqityiweyo kwiikhabhathi zasekhitshini. Iikhabhathi eziphambili zisebenzisa ukugqitywa komthi weti teak, ngelixa isiqithi esikhulu sekhitshi sisebenzisa ukugqiba okumhlophe ngaphezulu kweekhabhathi zomthi. Zonke izinto zokubala zazifakwe imabula emhlophe ngenkangeleko entle. Kanye ngentla kwesi siqithi sekhitshi kuyilo lwesilingi, kunye nekhefu elilinganayo nesiqithi, kunye nemiqadi yeplanga yokuhombisa. Ikwanazo nezibane zelanga ukunceda ukuzisa ukukhanya ngakumbi kwindawo.
Uhlobo lweKhitshi lobugcisa
Ingcibi yoYilo lweKhitshi
Iingcibi zeKhitshi yezandla
Ingcibi yekhitshi iBacksplash
Ingcibi yokuKhanya kweKhitshi
Ingcibi yemibala yeKhitshi
Umenzi wekhitshi weeKhawuntari zeKhitshi
Isitayile somsebenzi weKhitshi
Sithini isitayile segcisa? Ukuqonda ubuchule bokuyilwa kwekhitshi yesitayile somsebenzi, makhe sijonge imvelaphi yayo kuqala. Isitayela sezandla savela eNgilani ngekhulu le-19 ngenxa yoMbutho woBugcisa noBugcisa. Umbutho wezobuGcisa nobuGcisa yayiyintshukumo yamazwe ngamazwe enjongo zayo ikukuhlaziya uyilo nokuhombisa, kwaye yayimela ubugcisa bemveli. Oomatshini kunye nemveliso yefektri yayixhaphakile ngelo xesha, yiyo loo nto ibangela ukwehla xa kufikwa kumanqanaba kuyilo kunye nokusetyenziswa kwezinto eziyinyani kunye nomgangatho ophantsi.
Ngenxa yoko kwaye ekuphenduleni ngokuchasene nefenitshala enobunkunkqele kunye nobunzima obuvelisiweyo bexesha lama-Victorian, isitayile segcisa sazalwa. Ukulandela umgaqo ophambili wokuba into eluncedo kufuneka ibaluleke ngaphezulu kokuhombisa, ibeke phambili ekusebenzeni ngaphezulu kwayo yonke enye into. Kwaye ngokungafaniyo neenkcukacha ezihonjisiweyo zoyilo lweVictorian oluphefumlelweyo, isitayile sobugcisa sabeka ipremiyamu enkulu ngokulula kwaye sagxininisa ngakumbi kubugcisa. Nangona i-utilitarian kwindalo, isitayela seengcibi saba yinto ebonakalayo ebonakalayo kwaye ibonakalisa izitayela zokuyila kwimbali. Ngumtshato ogqibeleleyo wefom kunye nomsebenzi.
Ngokubanzi, ikhitshi yesitayile segcisa lichazwa yimigaqo emithathu esisiseko, uyilo oluchanekileyo olunemigca ecocekileyo, ulwakhiwo olukumgangatho ophezulu kunye nokuhonjiswa okuncinci.
Umgangatho omnandi we-wengue kunye neebhodi zokulinganisa ezifanayo kunye nemiqadi yokudala imvakalelo yeklasi kule ndawo ivulekileyo yekhitshi. Ikhitshi ngokwalo lenziwe ngomthi we-oki omnyama, obonisa ukutya okuziinkozo kwendalo kunye nombala njengoko bekungagalelwanga kakhulu entlabathini kwaye kugqunywe nge-varnish. I-slab entle yegranite yayisetyenzisiwe ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi, ngelixa iikhabhathi eziphambili zazisetyenziselwa i-quartztite engwevu engwevu.
Uyilo lwekhitshi lobuchwephesha lujolise ngakumbi kwisitayile sendabuko ngokubanzi okanye ukubukeka kwe-antique. Lulongezo olugqibeleleyo kumakhaya aphefumlelweyo emveli njengekhaya lelizwe, i-bungalow okanye i-cottage. Zeziphi izinto ezenza ikhitshi lobugcisa? Kukho inani leempawu zoyilo ezenza ikhitshi yesitayile somsebenzi wobugcisa.
Nazi ezinye zezinto ezenza ukuba ikhitshi lesitayile segcisa liphume kwezinye:
Ikhabhathi yokhuni oluqinileyo ngemibala etyebileyo -Izinto eziphambili ezibonisiweyo kwikhitshi yesitayile somthi ziinkuni eziqinileyo. Endaweni yokusebenzisa izinto ezingezizo ezokwenene isitayile segcisa sisebenzisa iikhithi ezinzima njenge-oki, icherry, imaple, ipayini kunye nehickory. Owona mthi uthandwa kakhulu ngum-oki. Uhlobo lwegcisa lubeka ugxininiso kubuhle bendalo bemithi ngokubonisa ikhabhathi entle kunye nemililitha elula. Ngaphandle kokubonisa iinkcukacha ezenziwe kakuhle, iinkuni zihlala zigqityiwe kwibala elinombala onzulu. Inokushiywa ingapeyintwanga, ivumela ipateni yokugaya kunye ne-aesthetics eyahlukileyo.
Imigca ecocekileyo kwaye akukho kuyilwa kwendibano yekhabhinethi -Ikhitshi yesitayile segcisa ngokubanzi ngokuthe ngqo xa kufikwa kuyilo lwayo. Ikwathanda ukusebenza ngaphezulu koyilo olugqithisileyo. Ayigxininisi kwiinkcukacha eziqingqiweyo okanye ukuhonjiswa okunzulu kodwa ibalaselisa ubugcisa obuphezulu. Endaweni yokubonisa imifanekiso, ibonisa indawo yokudibanisa endaweni yoko. Iikhabhinethi zihlala zingenasiphelo okanye zibonakalisa i-aesthetics elula enje ngeengcango ezicabaleleyo okanye iingcango zeglasi ezilungiselelweyo.
Iphalethi yombala ongathathi hlangothi -Ikhitshi yesitayile somsebenzi wobugcisa ikwathatha ukukhuthazwa kwindalo yiyo loo nto umbala wephalethi uhlala uhlala unethoni zomhlaba ofudumeleyo. Izikimu zemibala eqhelekileyo zibandakanya imibala yee-browns kunye neetani kunye nee-shades eziluhlaza njengezityebile zemoss okanye imifuno yehlathi. Eminye imibala ethandwayo yesitayile ziitoni ezinobusi, igolide, umhlwa kunye neeorenji ezinzulu. Funda njengoko singena nzulu kwiinkcukacha zepeyinti yombala wekhitshi yombala wekhitshi.
Ilitye leNdalo liyagqitywa -Kuba isitayile somkhitshi wobugcisa siphumeza indalo, kunqabile ukuba sisebenzise izinto zokwenziwa ukuze sigqibe. Ilitye lendalo yenye yezinto ezisetyenziswa rhoqo ekhitshini yesitayile segcisa. Ihlala isetyenziswa njengesixhobo sokubuyela umva, imiphezulu yeetafile okanye ukutyibilika. Ezinye iintlobo zamatye endalo anokusetyenziselwa esi sicelo yigranite, ilitye lesepha, isileyiti, itrvertine, njl. Njengomthi, ubuhle bendalo kunye nobuhle belitye lendalo buhambelana nobuhle bokwenyani besitayile somyili.
Amanqaku angalungiswanga kunye nezibane ezilungelelanisiweyo -Ugxininiso olunikwa yingcibi yegcisa ekusebenzeni kukwabonakaliswa kukhetho lwezixhobo zokukhanyisa. Isitayile sokukhanyisa izixhobo zokuhombisa kunye nokuhla kwezibane ezinemigca eyomeleleyo kunye neemilo zejiyometri. Ngokwesiqhelo isebenzisa isinyithi kwaye igcina ikhitshi ingakhanyiswanga kakuhle kuphela kodwa ikhuphe ubushushu obufudumeleyo nobonwabisayo. Funda njengoko sixoxa ngesitayile segcisa ukukhanyisa ikhitshi ngokweenkcukacha zonke.
Yakhelwe kwibhokisi yesidlo sakusasa -Ukuqaqambisa ubugcisa ngakumbi kunye nokwandisa ikhitshi ekusebenzeni kwayo ngokupheleleyo, iikhikhini zesitayile sobuchwephesha zihlala zibandakanya uhlobo lwakhiwe kwindawo yokuhlala. Uncedo olusebenzayo loku kukuba ishenxisa isidingo semingcelele yefanitshala eyongezelelweyo njengetafile kunye nezinye izitulo. I-nook encinci yesidlo sakusasa ebonisa ibhentshi yomthi eqinileyo kunye netafile yokutyela isebenza njengendawo yokuhlala yokutya okuqhelekileyo kunye nokuzonwabisa nosapho okanye nabahlobo.
zibiza malini ii-djs epatini
Ukubuyela umva okungafaniyo - Ekuphela kwento yokuhombisa esetyenzisiweyo ekhitshini yesitayile somsebenzi wobugcisa ngumqolo kunye kunye nemiphezulu yeetafile kunye neziqithi, ikhitshi lokubuyela umva yenye yezinto ezibonakalayo kolu loyilo. Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziswa njenge-backsplash yekhitshi yesitayile seengcibi ziithayile. Ezi tile zihlala zenziwe ngesandla kwaye zipeyintwe ngeenkcukacha ezityebileyo. Funda njengoko sijonga ezinye iindlela onokuzisebenzisa njenge-backsplash yekhitshi yakho yesitayile.
I-Hardware kunye nokulungiswa kwindawo enzulu okanye emnyama -Ikhitshi yesitayile somsebenzi wobugcisa inika eyayo i-touch eyahlukileyo nkqu kwiinkcukacha ezincinci kuyilo lwakho lwekhitshi. Ubucwebe bekhitshi okanye izixhobo zekhabhinethi ezinjengezibambo, amaqhina kunye notsalo kufuneka zilungiselelwe ukusebenza. Oku kufuneka kube lula ukukubamba kwaye kuhlala kukhulu. Xa kuziwa kuyilo, izixhobo zekhabethe zekhompyuter zihlala zinendlela eyomeleleyo yoyilo kunye nemigca echaziweyo.
Ngenxa yokuba imithi ininzi kule ndlela yekhabhinethi, unokufuna ukuqwalasela izixhobo ze-antique. Izixhobo zekhabhinethi, izixhobo zokupompa kunye nezinye izinto zihlala zigqibelele kwaye zishushu. Oku kubandakanya i-bronze ye-rubbed ye-oyile, ubhedu obudala, ii-patinas ezishushu kunye ne-antique enemibala emnyama emnyama. Izixhobo zentsimbi emnyama kunye notsalo nazo ziyathandwa kwesi sitayile. Gwema ukugqitywa okukhanyayo kwisitayela sekhandi njengoko zixhomekeke kwimbonakalo yanamhlanje.
Ikhitshi eliqinileyo lomthi wetiak kunye noyilo oluqaqambileyo lwophahla, olunemiqadi ebonakalayo kunye neetrasi. Imifanekiso yeefestile zemvulophu kwindawo yasekhitshini kwaye unike umbono omangalisayo wolwandle. Indawo yekhitshi ihlala ifumile, ke endaweni yomgangatho okhuni, esi sithuba sikhethe ukugqiba iithayile zeceramic. Zonke ezi zinto zazifakwe i-azurite greyite engwevu, kwisibheno esingaphezulu.
Umtsalane ophambili wekhitshi yesitayile sobugcisa yikhabhinethi emangazayo. Ingcibi yesitayile sekhitshi yobugcisa yavela ekuqaleni kweminyaka yoo-1900 kwaye ijolise ekuxabiseni kakhulu ikhabethe yesiko elenziwe ngesandla kunye neetoni zomthi ofudumeleyo kunye nesicwangciso somgangatho ovulekileyo. Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi lubonakaliswa ngokusebenza, ulwakhiwo olukumgangatho ophezulu kunye nozinzo oluphezulu.
Ukongeza koku, iikhabhathi zekhitshi elinobugcisa zizonke malunga neenkcukacha ezichanekileyo. Umthi oqinileyo wawusoloko usetyenziswa kwaye izinto zokwenziwa azisetyenziswa. Ikota yomthi osikiweyo kunye nokuhonjiswa kwayo okuhle, iicherry kunye nemephu yeemephu zizintandokazi zesintu ezisetyenziswa kwiikhabhathi zesitayile somsebenzi. Ezi khabhathi zomthi ziqinileyo zihlala zishiyekile zingapeyintwanga kwaye ziyinyani kwimeko yazo yendalo, zivumela ubuhle bazo obahlukileyo ukuba buvele. Ukulungiselela ukuphucula i-undertones kunye nombala otyebileyo womthi, ibala linokusetyenziswa kumphezulu walo.
Ngokubanzi, imiphetho ethe nkqo yesikwere isetyenziselwa uyilo lomnyango wekhabhathi ecaba okanye ephakanyisiweyo. Iingcango zeglasi ezikhokelayo ziqhelekile nakwizakhiwo zobugcisa. Zizinto ezincinci ezinje ngokubumba okuhombisa, ii-valance, ii-corbels kunye nezixhobo zexesha ezizisa ingqwalaselo kwiinkcukacha ezibonisa ikhitshi lobugcisa.
Ubungcibi bokwenyani buyafezekiswa ngokusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo zokudibanisa ekwakheni iikhabhathi. Ezinye izinto zokudibanisa eziboniswe kolu hlobo lwekhabhathi zizinto zokudibanisa, ukubola kunye nokuhlangana kweeton, amalunga emigodi kunye namalungu omzimba. Ii-Dowels zinokusetyenziswa endaweni yezikhonkwane.
Ukwakhiwa komgangatho, ukwakha okuqinileyo kunye nomsebenzi ogqibeleleyo womthi unokufezekiswa ngokuqesha abenzi bekhabhinethi abaqhelekileyo. Endaweni yokwakha ikhitshi yesitayile sobuchwephe njengoko uyenzela ngokwakho iprojekthi, ifuna iinkonzo zomchweli onamava. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni iikhabhathi zesitayile somdwebi kunye nekhitshi lesitayile segcisa linokufumana amaxabiso. Izinto ezisebenzisa imithi ekumgangatho ophezulu kunye neendleko zokufaka zombini ziyabiza kwaye ikhabhathi zithatha ipesenti enkulu yohlahlo-lwabiwo mali. Ke, xa usenza isigqibo sokwenza ikhaya lakho, qiniseka ukuba uhlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo lubelwe iprojekthi yakho.
Nangona kunjalo, ukuba usafuna ukwenza isitayile sekhabhathi iikhabhathi zekhitshi kodwa ungafuni ukuchitha imali eninzi, ezinye iindlela zala maxesha zingasetyenziswa kwimithi yamasiko. Abanye abaninimzi basebenzisa iinguqulelo esele zenziwe okanye ezomiselweyo zeekhabhathi. Ngaphandle koko, i-hardwood veneer ingasetyenziselwa ukufezekisa ingcibi yokujonga okuncinci.
I-walnut entle yendalo yayisetyenziswa kulo lonke eli khitshi lipheleleyo, kwaye yayicociwe ukuze ifezeke, isongeza ukubhengeza kwayo okuhle. Isebenzisa i-countertop ye-cream cream granite kunye nemiphetho ejikeleziweyo kunye nomhlaba ococekileyo. Elinye ikhitshi ligcina iitoni zangaphantsi kwaye zingathathi cala, kunye nemigangatho yamatye endalo, iitiles zangasemva ezihambelana nomdonga omhlophe.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, ekuphela kwento yokuhombisa ekhitshini yesitayile segcisa kukubuyela umva. Kuba ikhabhinethi yonke imalunga nokulula kunye nokusebenza, i-backsplash ibonelela ngethuba elifanelekileyo lokuzisa isandi okanye ukuhonjiswa kwikhitshi yesitayile somdwebi. I-backsplash iphula yonke i-monotony ye-woodworks enzima kwaye inika indawo indawo yokubamba iso. Kukho inani lezinto zokubuyela umva ezinokuphononongwa kwikhitshi lesitayile sobuchwephesha kwaye oku kubandakanya iithayile zobugcisa kunye neendidi ezininzi zamatye endalo.
Ngexesha lobugcisa kunye nentshukumo yobugcisa, ukwenziwa kwethayile entle kufikelele kwincopho yayo. Ngenxa yoko, iithayile zobugcisa ezenziwe ngezandla zithatha inqanaba leziko xa kusenziwa kubuyela umva. Iithayile zesitayile sendabuko zenziwe kusetyenziswa ukungunda okwenziwe ngesandla kwaye zihlala zinemibala yeglasi yendalo. Iithayile zobugcisa zihlala zihlala zipeyintwe ngeempawu zeentyatyambo okanye imiboniso ebonisa indalo okanye iArt Nouveau ephefumlelweyo. Ezi tile zipeyintiweyo zihlala zi-shades eziluhlaza okwesibhakabhaka okanye ziluhlaza ezinikezela ngokuthe gca nangokupholileyo kwiitoni ezishushu zomthi. Kule mihla, iithayile ezenziwe ngesandla kunqabile ukuba zifumaneke, zizenza zibize kakhulu. Nangona kunjalo ubuhle bayo obugqwesileyo benza ukuba ixabiso lixabise yonke ipenny.
Ngaphandle kwepeyinti yesandla, okunye ukugqitywa okuqhelekileyo kweethayile kukuqaqamba. Injengokubengezela inika iithayile umaleko wokunxiba weglasi okhokelela kwinkangeleko yawo ebengezelayo. Iithayile ezimenyezelisiweyo ngumdlalo ogqibeleleyo wokugqitywa kwe-matte kwikhabhathi yokhuni oluqinileyo kuba ibonelela ngokwahluka kunye nokwahluka kubume. Iithayile eziglasiweyo ziyafumaneka kwiitoni ezininzi kunye nee-hues. Ngaphandle kokwenza i-glazing, iithayile zinokuchwethezwa okanye zikrolwe kuyilo lwesiko njengamagqabi amancinci, iintyatyambo okanye iinkcukacha eziphefumlelweyo zendalo ukubanika ubunzulu kunye nembonakalo enomdla ngakumbi.
Ukubuyela umva ngamatye endalo kuqhelekile nakwikhitshi yesitayile somdwebi. Isilayiti ngumzekelo welitye lendalo elinokusetyenziselwa ikhitshi yesitayile sendlela. Ebonakaliswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, ongwevu kunye nomhlwa, isileyiti songeza ukufudumala ekhitshini xa sisetyenziswa njenge-backsplash. Umbala wayo weetoni zomhlaba uwenza ube ngumphelelisi ogqibeleleyo kwiikhabhathi ezityebileyo zomthi, ngelixa ukongeza ukubamba okungacacanga kombala ogqamileyo kwiphalethi yekhitshi. I-slate backsplash idibanisa kakuhle kunye ne-antique kunye nemveli yokuphefumlelwa kwekhitshi yesitayela somsebenzi.
Elinye ilitye lendalo elinokusetyenziswa njengesixhobo sokubuyela umva kwiikhitshi zesitayile somsebenzi yitravertine. I-Travertine yenziwe ngelitye lekalika kwaye ihlala ikhanya ngombala okanye i-creamy beige okanye emhlophe. Inezinto eziphantsi ezifudumeleyo ezimdaka ngombala okanye ezimnyama ngombala, ezisebenza njengezizalisekileyo kwimithi emnyama etyebileyo. Oku kufanelekile kakhulu kwabo bafuna ukwenza umahluko ocekeceke besebenzisa imibala ekhanyayo. Njenge-slate, i-travertine ifanelekile kwi-antique kunye nemveli yokuphefumlelwa kwekhitshi yesitayela.
Ukuya kwinkangeleko yangoku ecocekileyo, le yoyilo yasekhitshini ikhupha ubungangamsha bokuyilwa kweklasikhi, kodwa ineempawu ezichanekileyo nezincinci zedizayini yanamhlanje. Inemigangatho yemithi yeziqhamo yendalo kunye nesilingi, ngelixa iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa imithi yetiak yendalo ngokunjalo. Izinto zokubala ziyigreyite egreyidi, ukunceda ukunciphisa imibala eqaqambileyo yendalo yomthi. Ukukhanyiswa kwe-Rustic pendant phezu kwesi siqithi kunye nesitayile sokukhanyisa ukukhanya kwesibane kunika ukukhanya okuninzi kwaye kunceda ukongeza kumtsalane woyilo lwekhitshi.
Njengoko sele kukhankanyiwe, isitayile segcisa sibonisa amanqaku okusetyenziswa kwaye igxininisa kwimigca ethe tye kunye noyilo oluthe ngqo. Oku kukwabonisiwe nakwindidi yezixhobo zokukhanyisa ezisetyenziselwa ikhitshi yesitayile segcisa. Ukulahla izibane, izibane ezixhonyiweyo okanye iikhandlela zihlala zisetyenziswa njengeyona ndawo iphambili yokukhanya kolu hlobo lwangaphakathi. Ngokwesiqhelo, ezi zinto zibekiweyo zibekwa embindini wekhitshi okanye ngaphezulu nje kwesiqithi. Abakhanyisi kuphela isithuba kodwa bakwasebenza njengesixhobo esimangalisayo.
Uhlobo lwezinto zokukhanyisa ikhitshi lobugcisa zibonakaliswa yimigca eyomeleleyo, iifom ezilula kunye neemilo zejiyometri. Azichongwanga kwaye zibonisa ukusebenza kunye nokusebenza njengoko zihlala zinyanisekile kwimigaqo yoyilo lwesitayile segcisa. Isitayile sokukhanya kwezibane nazo zixhaphakile kolu loyilo. Olu hlobo ukuba izinto ezenziwa rhoqo zihlala zenziwe nge-ironwork, iglasi kunye nokugqitywa okumnyama. I-Mic yenye yezinto ezisetyenziswayo ngokwendalo kwezi ntlobo zokukhanya. Ngaphandle kwemihlobiso, izikhuni kunye nezibane ezixhonywe ngaphezulu zinokusetyenziswa.
Izibane zeTiffany zihlala zisetyenziselwa isitayile segcisa. Izibane zeTiffany luhlobo lomthunzi olwenziwe ngamaqhekeza eglasi. Olunye loyilo oludumileyo lwesibane sikaTiffany sisibane seglasi esikhokelweyo. Iziqwenga zeglasi zihlala zihlelwe kwipateni ebonisa izinto zendalo ezinjengeentyatyambo, imithi, amagqabi, izihlahla, amabhabhathane, oonombombiya okanye iintsiba zepikoko. Ukwenza le patheni kunye nokubonisa ezi zoyilo, iglasi enemibala isikwa kwiimo zejometri ezinje ngoonxantathu, izikwere, iiovali kunye noxande. Ubuhle bokuba nesibane sikaTiffany kwikhitshi lesitayile sobuchwephesha kukuba inika indawo ekugxilwe kuyo ngaphandle kokukhuphisana nobuhle bendalo bekhabhathi yomthi eqinileyo. Kwakhona, uyilo lwayo olumibalabala lunegalelo kwimibala egudileyo kwiphalethi engathathi hlangothi yoyilo lwekhitshi lobugcisa.
Umthi we-beech wendalo wawusetyenziswa kwesi sitayile sekhitshi sangoku, ubonakalisa amaqhina endalo eepaneli zeenkuni, esenza isibheno selizwe / rustic. Izixhobo zokubala ezimnyama kunye nezimvi nazo zikwanceda ukuphucula oku kujongeka kwe-rustic, ukuyinika ukubukeka okungaphezulu, ukubukeka kwendalo. Izibane ezihonjisiweyo kunye neglasi epeyintiweyo ebonisa ezinye zeengcibi zesitayile soyilo saziwa.
Isitayile sobuchwephesha silawulwa sisikimu sombala ongathathi hlangothi. Kuba ithatha inkuthazo kwindalo, imibala eguqukileyo, imibala yomhlaba kunye nokungathathi cala zisetyenziswa kakhulu. Imizekelo yazo imhlophe, khrimu, thotho, mthubi kwaye zithambile i-brown, green, rust orange, honey golide kunye nobomvu obunzulu. Imibala emdaka ihlala ibonakaliswa kukusetyenziswa kwekhabinethi yokhuni olunemigangatho kunye nomgangatho okhuni, ngelixa imibala egudileyo enjengomthunzi othulisiweyo wohlaza okanye i-rust orange ihlala iboniswa ngezinto zangasemva.
Imiphezulu yeetafile inokuthi ithathe nawuphi na umbala ovela kwi-beige ethambileyo, emhlophe ukuya kumdaka omnyama kunye nemifuno. Eminye imibala egudileyo efihlakeleyo ikwaziswa ngaphakathi ngaphakathi kusetyenziswa izixhobo zokukhanyisa okanye izixhobo zekhabhathi kunye nezinye izixhobo. Imibala ehambelana nayo inokusetyenziswa ekhitshini iqhubela phambili ukugxininisa umbala onzulu wemithi ecebileyo.
Ibonisa ubugcisa obugqwesileyo, le khitshi ikhupha ubuhle kunye nomgangatho olindelweyo kwiikhitshi zakudala. Isebenzisa umthi oqinileyo we-mahogany kuyo yonke ikhabethe enebhedu e-oyile etsala ukutshatisa uyilo lwepaneli yodidi lweekhabhathi kunye nokufakwa kwesikhanyisi se-beige granite, esikhazimliswe kwimfezeko kweso spunk songezelelweyo.
Imiphezulu yeetafile yamatye endalo ikwayenye into ephambili kwiikhitshi zesitayile sezandla. Eminye imizekelo yamatye endalo anokusetyenziswa njengemiphezulu yeetafile yigranite, imabhile kunye nelitye lesepha.
Ngokubanzi, inyengane yeyona nto idumileyo yokuphendula ikhitshi. Iqukethe i-quartz, i-feldspar kunye ne-mica. Olu lwakhiwo lukhethekileyo lunika i-granite ubunzima bayo kunye nobuhle bendalo obahlukileyo. Ngaphandle kokubukeka okumangalisayo kwe-aesthetics, i-granite yomelele, ayimelana nobushushu, ayinyangeki kwaye ayinamabala okuqala. Granite yaziwa kakuhle ngenkangeleko yayo eyahlukileyo ebandakanya iiflecks, amachaphaza amnyama, imithambo kunye nemithambo. Xa isetyenziswa njengesixhobo sokubala, yiya kwigranite ebunjiweyo okanye ebunjiweyo kwaye unamathele kwabo banemibala engathathi hlangothi emhlophe, emnyama, emdaka okanye ngwevu. Unokuphinda ujonge igranite enemibala yobusi kunye negranite eluhlaza ukuba ufuna ukongeza ubomi ngakumbi kwikhitshi lakho lesitayile.
I-Marble lolunye uhlobo lwelitye lendalo elibonakaliswa kukuvela kwemithambo ehamba ngokukhululekileyo. Luhlobo lwelitye lekalika elibunjwe ikakhulu yi-calcite yezimbiwa kunye nezinye izimbiwa ezinje ngodongwe, i-mica, i-pyrite, i-quartz kunye ne-graphite. Ikwayinto ekuhlala kuyo i-countertop kwaye inobushushu obupholileyo bendalo obugcina indawo yokusebenza ilawulwa ngobushushu. Xa isetyenziswa njengendawo yokuphamba yekhitshi yesitayile somsebenzi wobugcisa, ubuhle bemarble yeklasikhi bongeza ubuhle bendalo kunye nobunkunkqele. Ubuhle bayo bendalo kufanelekile ukuba buboniswe kwaye bunokusebenza njengomtsalane ophambili wekhitshi. Xa isetyenziswa njengesixhobo semiphezulu yeetafile somenzi wekhitshi, khetha i-marble enombala we-beige okanye ukhilimu njengoko izalisa kwaye ithelekisa kakuhle nobushushu bekhabhathi yomthi eqinileyo.
Ilitye lesepha lolunye uhlobo lwelitye lendalo elenziwe ikakhulu ngetalc. Ithambile ngokwemvelo, kodwa xa isetyenziswa njengesixhobo sokubala, ixutywe nepesenti ephezulu yequartz ukuyenza yomelele kwaye inxibe ixesha elide xa kufikwa ekusebenziseni ikhitshi kwemihla ngemihla. Ilitye lesepha likwabonakaliswa yindawo yalo egudileyo. Iyamelana neasidi kwaye imikrwelo inokulungiswa ngokulula ngokuthambisa ioyile okanye isanti. Nangona kunjalo yintoni ebeka ilitye lesepha ngaphandle kwayo yonke enye into ngumbala wayo owahlukileyo. Umgangatho owahlukileyo welitye lesepha kukuba ihlala inombala ongwevu ekuqaleni kwaye emva koko itshintshe ibe ngamalahle okanye umbala omnyama ongwevu xa sele usetyenziswe ngeoyile yezimbiwa. Umbala ocekeceke wendalo welitye lesepha awuphambuki kumbala ongathathi hlangothi wombala wekhitshi yesitayile segcisa.
imifanekiso yeflegi yelitye
Njengenxalenye yelitye lendalo, iinkuni zikwasetyenziswa njengesixhobo semiphezulu yeefestile zeengcibi. Olu lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukongeza imfudumalo kwinkangeleko yekhitshi lakho kwaye ukuba ufuna ukwenza indawo yamkele ngakumbi. Izinto zokubala zihlala zisetyenziselwa iziqithi zasekhitshini-ngakumbi ezo zinemibala eyahlukileyo kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi, kuba igcina ukuhonjiswa kunye nokugqitywa ngokudibeneyo.
Imiphezulu yeetafile yomthi eqinileyo nayo yomelele kwaye ibonakalisiwe ukuba ihlala iminyaka. Olona ncedo luphambili lwee-countertops zomthi eziqinileyo kukungafani kwabo kunye nefom enokwenziwa ngokwezifiso. Nangona kunjalo, xa usebenzisa itafile yomthi eqinileyo, qiniseka ukuba umphezulu utywinwe ngokufanelekileyo ukukhusela t kumonakalo wamanzi. Ubungakanani obufanelekileyo beplathi yomthi eqinileyo ekhitshini yesitayile somsebenzi zii-intshi ezi-1 intshi okanye ngaphezulu. Ezinye iintlobo zeenkuni ezinokuthi zisetyenziswe njengemiphezulu yeetafile yicherry, itiak, i-oki kunye ne-walnut.
Ngokuqinisekileyo kufanelekile kwinkcazo yekhitshi lobugcisa, eli gumbi lifudumele kwaye liyamema. Imigangatho yeplanga e-teak yendalo ehlanganisiweyo yadityaniswa nekhabhathi yomthi we-oki, ukuyinika umahluko okhoyo wendalo. Izinto zokubala ezisetyenzisiweyo ziyitoni ebomvu ebomvu, ehambelana kakuhle nombala wesiseko sekhabhinethi. Ukongeza ubunzulu ngakumbi kwimibala yeethayile eziluhlaza zehlathi ezibekwe kwi-backsplash.
Amakhitshi ezandla ayaziwa ngekhabhathi entle yomthi kwaye eli gumbi libonelela kakhulu. Iikhabhathi zegolide zelnut ezinee-corbels zakudala eziphefumlelweyo kunye nezithuba zazisetyenziswa kuyo yonke le khitshi, kwaye yayineetafile zokukhanya zegranite yokukhanya ukuze zilingane kunye neetayile ezibuyela umva ezimhlophe.
Ukuzalisa iikhabhathi zeenkuni eziqinileyo, i-hardwood flooring isetyenziselwa ikhitshi yesitayile somsebenzi. Umbala womgangatho uhlala umnyama kwaye ucebile, njengokhuni lwe-cherry, i-oki okanye i-maple kwaye ungagqitywanga. Gwema ukugqitywa kwepiyano okanye imigangatho ebengezelayo. Ukuba awuyithandi into yokugcina izinto ezifunekayo ukuze uqiniswe ngomthi, ungasebenzisa ezinye izinto ezinje ngeithayile zeceramic ngomthi ofana noyilo okanye i-linoleum flooring.
Ngelixa iikhitshi zala maxesha zisebenzisa iikhabhathi ezilaminethiweyo, olu luyilo lukhethe ukusebenzisa ubugcisa kunye nekhitshi eliphefumlelweyo, lisebenzisa iikhabhathi zelnut eziqinileyo ezinobugcisa obugqityiweyo kunye nokugqiba. Ikhitshi elikhulu ligqibe umthi ngokulinganayo kwaye lifakwe ilitye lesepha elingwevu kunye nomphetho othe ngqo wokujongeka kwangoku.
Amakhitshi amnandi aneengcibi zomthi we-cherry kunye nekhabhathi zifudumele kwaye ziyamema. Le khitshi inezinto ezahlukeneyo zokugqibezela ezinje ngeWolf kunye nezixhobo zeSub Zero kunye nophahla lwesiko lobhedu olunceda indawo ibonakale.
Isiqithi esikhulu sentsasa sakusasa ekhitshini lobugcisa yindawo efanelekileyo yosapho yokuqokelela kunye namava okulungiselela isidlo kunye. Ikhabhinethi yesiko, ukukhanya kweenkuni kunye neetafile zokukhanya zegranite zibonisa indawo efudumeleyo kwaye inceda ukugcina uyilo luqaqambile.
Ikhitshi elimile l elisebenzisa iikhabhathi ezakhiwe kakuhle ezenziwe ngomthi oqinileyo weti, kwaye zinikwe isambatho se-varnish. Oku kunceda ukugxininisa ubuhle bendalo beekhabethe zomthi, kunye nokuxhasa umgangatho wezitena kunye nokwaleka kwe-polyurethane. Enye into enomdla iya kuba sisilingi sayo, enee trusses ezibonakalayo zophahla kunye nokukhanya kwesibhakabhaka.
Eli khitshi linomtsalane okhetheke kakhulu. Isebenzisa ukugqitywa kwe-walnut efanayo kuzo zonke iikhabhathi zayo, kodwa yintoni eyenza ikhetheke kuyilo lwesilingi. Imiqadi egqunywe ngomthi nangokubumba yayisetyenziswa kwaye igqityiwe kumnatha ukuyigcina ijongeka ifana nekhitshi lonke. Ukongeza, uya kuqaphela ukuthungwa okubonelelwe ngezitena zepatron ezibekwe eluphahleni.
izikhamiso zomtshato kwibhayibhile
Le khitshi yanamhlanje njengokuqaqamba nokucoceka kuyo ngenxa yokukhetha imibala kunye nokugqitywa. Zonke iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa i-teakwood eqinileyo kwaye inezixhobo zokubala ze-quartz ezingwevu. Ithoni ye-orenji yeekhabhathi igcwalisa kakuhle i-maple floor, ngelixa isilingi esine-sloped ngombala we-fruitwood ongathathi hlangothi wongeza indawo yokufudumala kwindawo.
Isithuba esincinci sekhitshi yanamhlanje kunye noyilo oluhlanganisiweyo olugqibeleleyo kwisithuba esilinganiselweyo. Le inesimbo esirustic kuyo, njengoko ngokuqinisekileyo ibonisa ukungafezeki kwemithi yendalo abayisebenzisileyo. Isiseko sekhabhinethi sisiseko somthi esimnyama esimnyama, ngelixa i-bar counter bas yenziwe kwi-redwood. Zenziwe ngentlabathi encinci kuphela ngenxa yoko zibonisa ubume bendalo beenkuni. Kwiziqithi zasekhitshini, iinkuni zeTeak eziqinileyo zazisetyenziswa njengendawo yokubeka imiphezulu yeetafile.
Izinto zoyilo zakudala kunye neempawu ezibonakalayo ngokucacileyo kuyilo lwekhitshi. Uza kubona iicorbels zesitayile saseKorinte esisebenza njengesixhobo sokuhombisa kwiikhabhathi, kunye nakwiingqameko zegothic kwiingcango zekhabhathi yeglasi. Zonke iikhabhathi zisebenzisa umthi we-teak wegolide ococekileyo kwaye uyiphakamise ngegranite efudumeleyo efudumeleyo eneprofayile /
Ngamaxesha athile obukhosi okhuthazayo, le ndawo yangaphakathi ikhupha ubuhle kunye nobabalo lwangaphakathi lwangaphakathi. I-flooring yindibaniselwano yeetiles zetyhubhu yemabhile kunye neetiles zecaramite emdaka, ezenza iphethini enomdla kwimigangatho. Iikhabhathi zekhitshi kwelinye icala, zisebenzisa i-walnut yendalo enesipin se-satin, kwaye siyiphakamise nge-chocolate granite enemibala.
Imithi yemephu yendalo enee-burly grains kunye ne-marbled floor ephantsi inika eli khitshi indawo ye-rustic kunye nabantu abadala ukuba baziva kuyo. Iithoni ezibomvu-orenji zangaphantsi zigcwalisa ithoni emthubi ekhanyayo kwiikhabhathi zasekhitshini, kunye neendonga ezimthubi ezimthubi.
Ikhitshi eliphefumlelweyo eliqhelekileyo elinamakhabethe eenkuni aqinileyo kunye neenkcukacha ze-cornice, ezinikezwe i-twist yanamhlanje ngokungasebenzisi amaqhina abonakalayo kunye nokutsala ukujonga okucocekileyo. Ikhitshi lisebenzisa umthi we-teak oqinileyo kuyo yonke indawo ukuyinika ithoni entle yeorenji, kwaye uyiphakamise ngetafile ebomvu ebomvu ebomvu.
Ukukhanya kweendonga ezityheli kusebenza njengemvelaphi egqibeleleyo yeekhabhi zomthi wom-oki omnyama ezisetyenziswa kweli khitshi. Ezi khabhathi zidityaniswe nezinto zokubala ezenziwe ngamatye esanti amthubi ezinepateni entle kakhulu yokudla okuziinkozo. Ngaphandle kwalonto, ikhitshi lisebenzisa iithayile ezinemizobo yokubuyela umva ngokudibanisa imfusa kunye negolide.
Le khitshi ekhanyisiweyo inezinto ezilula ezenziwe ngekhitshi ezisebenzisa iinkuni zecherry kwindawo yayo yendalo, enezinto zokubala zegranite ezimnyama kunye nokubuyela umva kwakhona. Inqwaba enomdla yezibane ze-bulb ezipheleleyo ezixhonyiweyo zinqunyanyisiwe ngaphezulu kwesiqithi sendawo enesidlo sakusasa kwaye yenza umbono ophawuleka uyilo. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa ukugqitywa kwe-matte varnish ukuyijonga ngakumbi, ngelixa imigangatho yeplanga ye-beech inceda ukulinganisa iiorenji ezivela kwiikhabhathi.
Iikhabhathi eziqinileyo ezifakwe i-Mahogany ezinekhabhathi zegolide zegranite zinika le khitshi i-vibe yeklasikhi entle, ngelixa ikhawuntari yesiqithi ekhitshini eyakheke ngokukodwa inceda ukunika eli khitshi isibheno sanamhlanje, kusetyenziswa i-slats ethe nkqo egreyini kwisiseko sayo ukuyinceda ilandele imilo Ikhawuntari.
Olunye uyilo lwekhitshi oluphefumlelweyo lwe-neo-classic elisebenzisa iikhabhathi ezintle zewalnut zekhitshi kunye nezixhobo zokubala zegranite ekhanyayo, zenza imibala efanelekileyo. Ubuchwephesha bobugcisa bekhabhinethi obudibeneyo kunye ne-rustic flooring flooring inika le ndawo yekhitshi i-antique vibe eyiyo, ngaphandle kokusoyikisa.
Ii-burls zemithi yemephu yendalo ziphinde zagxininiswa kolu luyilo lwekhitshi, kodwa zinikwe inkangeleko yanamhlanje, njengoko iphosiwe kwisiphelo esihle se-satin kwaye sinebala ngombala obomvu we-mahogany. Ukunceda ukulinganisa iithoni ezibomvu zeekhabhathi yindawo yokubeka grey kunye nemigangatho yamatye ekhrimu elula.
Ngestayile selizwe, eli khitshi ngokuzithemba libonisa imbonakalo yendalo yokugqitywa komthi okusetyenziswe kwisithuba. Ukusuka kwiibhodi zomgangatho ukuya kumzimba wekhabhathi ukuya kuthi ga kwizakhelo zeefestile, uya kubona ngokulula umbala wombala wendalo, kunye nokungafezeki komthi. Iikhabhathi zasekhitshini ngokukodwa zisebenzisa i-walnut yendalo ngesibane sokukhanya segranite esifudumeleyo. Eli khitshi likhangeleka liqaqambile ikakhulu ngenxa yobuninzi bokukhanya kwendalo, ngoncedo lwezibane zala maxesha ngokunjalo.
Uyilo lwekhitshi oluphefumlelweyo olusebenzisa indibaniselwano yesidumbu sekhabinethi yendalo, kunye nesiseko sesiqithi sekhitshi esimhlophe. Ezi khabhathi zinee-corbels zokuhombisa kunye nokuhonjiswa okujikwe kwizithuba ukuze zinike ubuntu ngakumbi, kwaye zombini zine-slab e-granite entle.
Ukuya kukhangeleka okwangoku, eli khitshi ligxile ekulula kwaye kugqitywe ngokugqibeleleyo. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zonke zazipeyintwe ngombala omhlophe kwaye zabekwa eludongeni olungwevu. I-granite emnyama yayisetyenziselwa i-countertop, kwaye iileyili ezimhlophe ze-beveled subway zazisetyenziselwa ukubuyela umva. Isiqithi sekhitshi kwelinye icala, sisebenzisa ukugqiba ngokugqibeleleyo nangokugqibeleleyo, kwaye sifakwe ngemabhile emhlophe ngokwahluka okuhle.
Indawo encinci yekhitshi esebenzisa iikhabhathi zendalo zekhitshi enesipinishi se-satin ngaphezulu ukuyinika ukukhanya okungacacanga. Isebenzisa ilitye lesepha eliluhlaza elikhethekileyo kwiikhawuntari, inika ubume obahlukileyo kodwa okwendalo.
Isikripthi somsitho womtshato ongengowenkolo
Imigangatho yecheri ecekethekileyo yadityaniswa kunye neekhabhathi zekhitshi ezibomvu, oko kwenza ukuba i-rustic ive ekhitshini. Ibekwe ngokuchasene nodonga olutyheli olukhanyayo, izixhobo zokubala ezinombala omthubi-khrimu zihambelana ngokuchanekileyo neendonga, ngelixa iithayile zangaphantsi ezimnyama ezikwi-backsplash zihambelana nezixhobo zasekhitshini ezimnyama ezisetyenziswa ekhitshini.
Elinye ikhitshi eliphefumlelweyo elidibanisa ngokuzithemba ukudibanisa iinkuni ezahlukeneyo. Imigangatho yeplanga ekhanyayo yayihamba kunye nekhabhathi ezimnyama zekhitshi ezonyusa ukuphakama okupheleleyo kwesilingi, ukuyenza yoyike. Izixhobo zokubala ezimnyama ze-galaxy kunye nesikhumba esimnyama se-barstool Upholstery iyaqhubeka nokubonelela ngokungafaniyo kwindawo, kwaye kwangaxeshanye, isebenza njengomhlaba ongathathi hlangothi kwisithuba esigcwele iithoni zomthi ezifudumeleyo.
Isitayile selizwe esisebenzisa iithayile zelitye eliqingqiweyo kwipateni ye-chevron yomgangatho, kwaye uyidibanisa nekhabhathi yendalo yasekhitshini enezithuba zokuhombisa ukuyinika ubunzulu ngakumbi kunye nokwenza ngcono ukuziva kwayo kweklasikhi. Imiphezulu yeetafile isebenzisa uhlobo olwahlukileyo lwegranite enombala oluhlaza ongwevu, ngelixa i-backsplash idibanisa iithayile ezinemibala emithandathu kunye neethayile ezikhanyayo zeceramic.
Le khitshi ngokuqinisekileyo iphakamisa indawo ekhoyo yodonga yokugcina, ihlala phantse ngokupheleleyo-kwigumbi. Isilingi enefestile kunye neefestile zegafile kunye neeteki zomthi wetiakwood inceda ekuphuculeni ngokuthe nkqo kwendawo kwaye yenze ukuba ijongeke iphangalele, ngelixa uluhlaza we-mint wongeza ukubamba okuhlaziyayo nokwangoku ekhitshini.
Le khitshi yanamhlanje enobeko oluvulekileyo isebenzisa indibaniselwano eguqukayo yokugqitywa okumhlophe kunye ne-mahogany. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zisebenzisa isiseko esimhlophe esinee-counters ze-butcher ze-mahogany, ngelixa isiqithi sekhitshi sisebenzisa isiseko se-mahogany esinee-marble ezimhlophe.
Imithi ye-teak ekhanyayo eyenziwe ngobunjineli inika umhlaba umgangatho ococekileyo ococekileyo, onceda ukuvelisa ubuhle bekhabhathi zasekhitshini zendalo. Zonke iikhabhathi zisebenzisa ukugqiba okufanayo kunye neenkuni, kubandakanywa ii-cornices kunye neefestile zeefestile, okwenza ukuba indawo yonke ibonakale idibeneyo.
Iindonga eziluhlaza ze-Sage zinika ithoni epholileyo yokufihla kwesi sithuba, njengoko isebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zemithi ezigqityiweyo ezinobushushu obuphantsi. Umgangatho ngumthi we-beech okhanyayo, ngelixa iikhabhathi zasekhitshini ezisetyenzisiweyo zingumthi weziqhamo zendalo, isanti kwaye zigqitywe ngokugqitywa kwe-matte varnish. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa umthi ofanayo, kodwa sigqibe ngethoni emdaka ngombala okwahlukileyo.
Imigangatho yamatye e-Quarry inika eli khitshi indawo ekhethekileyo yokuziva, ngelixa iikhabhathi zekitchen ezenziwe ngamaplanga kuMthi waseMahogany zinika ukuqonda ngakumbi. Uphahla lwendawo zii-maple slats zokhuni, ukongeza ubume kunye nephethini kumphezulu wesilingi.
Amakhitshi obugcisa ayaziwa ngeekhabhathi zawo zomthi zokuhombisa. Imizobo entsonkothileyo, imizobo kunye neenkcukacha ezigqityiweyo zeekhabhathi zasekhitshini ngokucacileyo zibonisa ukuba inesimbo saseSpain. Sebenzisa ukhuni lwe-walnut lwegolide oluhambelana nomthi osetyenzisiweyo kwiingcango, iibhodi ezisezantsi kunye neefestile, uyilo lukhangeleka luhambelana kwaye lucingwa kakuhle. Isiqithi sekhitshi lesiqhelo sibonelela ngobuninzi bokugcina kunye neebhodi zokusika zilungile. Iimpawu zekhitshi yobhedu ehlikihliweyo enjengezitya zokuhlambela ezimbini ezongezayo zongeza ukubamba kwezinto ezindala kwisithuba, ngelixa i-slab entle yegranite iyenza ibonakale ikumgangatho kwaye intle.
Iikhitshi zaseMeditera - Uyilo lweKhitshi oluMnyama - Uyilo lweKhitshi Iingcamango - 143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Iikhitshi zesitayile saseSpain - Uyilo lweKhitshi yesiNtu
iqala nini imitshato
iingoma zomtshato zokuqala ezithandwayo
Iivesi zebhayibhile malunga nendima yendoda
Izimvo zangasese zokuhlambela
enxibe ilokhwe emnyama emtshatweni
ukuphakama kwebha yekhabethe